Search Results for “Diamond Princess” – DVB
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Diamond Princess သင်္ဘော ခရီးသည်တဦး ထပ်မံသေဆုံး
Diamond Princess အပျော်စီးခရီးသည်တင်သင်္ဘောမှ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ခရီးသည် အမျိုးသား တယောက်ဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ ၆ ယောက်အထိ ရှိလာပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသားဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးတဲ့ ပထမဆုံးဗြိတိန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး အဲဒီသင်္ဘောပေါ်မှာ ကူးစက်ခံရသူ ၇၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ Diamond Princess သင်္ဘောပေါ်က ခရီးသည် ၆ ယောက်အပါအဝင် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၁ ယောက်အထိ ရှိလာပါတယ်။ ဂျပန်တနိုင်ငံလုံးမှာ ကူးစက်ခံရသူကတော့ ၂၃၄ ယောက် ရှိနေပါတယ်။ Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကမ္ဘာတဝှမ်းသေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၂,၉၂၄ ဦး၊ ကူးစက်ခံရသူ ၈၅,၂၀၇ ဦးနဲ့ ပြန်ကောင်းမွန်လာသူကလည်း ၃၉,၅၀၄ ဦး ရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံနဲ့ နယ်မြေပေါင်း ၆၀ မှာ ကူးစက်ပြန့်ပွားနေပါတယ်။ တရုတ်ပြည်မကြီးမှာ စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ ၂,၈၃၅ ဦးရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပ ဒုတိယအများဆုံး သေဆုံးနိုင်ငံကတော့ အီရန် ဖြစ်ပါတယ်။ အီရန်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၃၄ ယောက်ရှိပြီး ကူးစက်ခံရသူ ၃၈၈ ယောက်ရှိပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အာရှ ၊ ဥရောပ ၊ အမေရိက ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေအပြင် အီဂျစ်၊ အယ်ဂျီးရီးယားနဲ့ နိုက်ဂျီးရီးယား စတဲ့ အာဖရိကနိုင်ငံတွေအထိ ကူးစက် ပျံ့နှံ့နေတယ်လို့ Worldometer ဝက်ဆိုက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အပျော်စီးသင်္ဘော Diamond Princess ပေါ်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၃၉ ဦးထပ်တွေ့
အပျော်စီးသင်္ဘော Diamond Princess ပေါ်က နောက်ထပ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၃၉ ယောက်ကို တွေ့ရှိတယ်လို့ ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်မှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခံရသူ ၄၉၂ ယောက်မှာ ကူးစက်ခံရသူ ၁၇၄ ယောက် ရှိသွားပြီလို့ ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ နောက်ပြီးသီးခြားစောင့်ကြည့်တဲ့ ဂျပန်အရာရှိတဦးမှာလည်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတာ တွေ့ရှိတယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ခါတိုက သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။ ဟောင်ကောင်မှာ ဆင်းသွားတဲ့ ခရီးသည်တယောက် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတာ တွေ့ပြီးနောက် Diamond Princess သင်္ဘောကြီးကို တိုကျိုမြို့တောင်ပိုင်း ယိုကိုဟားမားဆိပ်ကမ်းမှာ သီတင်းနှစ်ပတ်ကြာ သီးခြား စောင့်ကြည့်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတွေကို သင်္ဘောပေါ်ကနေ ဂျပန်ဆေးရုံဆီ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ကျန်အမှုထမ်းတွေနဲ့ခရီးသည်တွေကို ဗိုင်းရပ်စ် ရှိ မရှိ ဆက်လက်စစ်ဆေးနေပါတယ်။ အပျော်စီးသင်္ဘော Diamond Princess ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်က ယိုကိုဟားမားဆိပ်ကမ်းကို ရောက်လာခဲ့ပြီး အမှုထမ်းခရီးသည် ၂၆၇၀ လိုက်ပါလာတယ်လို့ ရိုက်တာသတင်းအရ သိရပါတယ်။
ဂျပန်တွင်ဆိုက်ကပ်သည့် အီတလီအပျော်စီးသင်္ဘောတွင် COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ ၅၀ ခန့်ရှိလာ
ဂျပန်နိုင်ငံ နာဂါဆာကီမြို့ဆိပ်ကမ်းမှာ ပြင်ဆင်ဖို့ ကမ်းကပ်ထားတဲ့ အီတလီ အပျော်စီး သင်္ဘောမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရသူ သင်္ဘောသားဦးရေ ၄၈ ဦးအထိ ရှိလာတယ်လို့ ရိုက်တာသတင်းက ဧပြီ ၂၃ ရက်မှာ ဖေါ်ပြပါတယ်။ ဒီနေ့ သင်္ဘောသားဦးရေ ၁၄ ဦး ထပ်တိုးအတည်ပြု လူနာဖြစ်လာပြီး အကုန်လုံးဟာ စားဖိုမှူး ဒါမှမဟုတ် အကျွေးအမွေးပိုင်းမှာ တာဝန်ယူနေတဲ့ သင်္ဘော ဝန်ထမ်းတွေချည်းဖြစ်တယ်လို့လည်း နာဂါဆာကီစီရင်စု တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောပါတယ်။ The Costa Atlantica အပျော်စီးသင်္ဘောမှာ သင်္ဘောသားတွေကူးစက်ခံရမှုဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လက ယိုကိုဟားမားမြို့မှာ Diamond Princess အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်က သင်္ဘောသားနဲ့ ခရီးသည်တွေ ၇၀၀ ကျော် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ်ပြီးတဲ့နောက် ဒုတိယ ဖြစ်စဉ်ပါ။ The Costa Atlantica သင်္ဘောဟာ နာဂါဆာကီဆိပ်ကမ်းမှာ ပြင်ဆင်ဖို့ဖေဖေါ်ဝါရီလကုန်က ဆွဲလာခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ မူလက တရုတ်မှာ ပြင်ဆင်ဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့တာ ကပ်ဘေးကြောင့် ဂျပန်ကို ရောက်လာ တာ ဖြစ်တယ်လို့ ရိုက်တာသတင်းဌာနက ရေးသားထားပါတယ်။
၂၀၂၀ တိုကျိုအိုလံပစ် ဆက်ကျင်းပမည်ဟု ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် အတည်ပြု
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုအတွက် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာစရာ မလိုဘဲ ၂၀၂၀ တိုကျိုအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကို ဆက်ကျင်းပသွားမယ်လို့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က မတ်လ ၁၄ ရက်မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ မတ်လ ၁၄ ရက်အထိ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၁၄၂၃ ဦး ရှိပြီး သေဆုံးသူက ၂၈ ဦး ရှိပါတယ်။ ကူးစက်ခံရသူတွေထဲမှာ ယိုကိုဟားမားဆိပ်ကမ်းမှာ ကပ်ထားတဲ့ Diamond Princess အပျော်စီး သင်္ဘောပေါ်ကလူ ၆၉၇ ဦး ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အကြီးအကျယ် မြင့်တက်လာတာကို မတွေ့ဘူးဆိုတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ စကားကို ကိုးကားပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးက တိုကျိုအိုလံပစ် ဆက်လုပ်မယ်လို့ ပြောခဲ့တာပါ။ ရှင်ဇိုအာဘေးက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကျော်လွှားပြီး နဂိုစီစဉ်ထားသလို အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပလိုတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကုန်ရောင်းခွန် ယာယီလျှော့ချဖို့ လွှတ်တော်အမတ်တွေ အဆိုပြုထားတဲ့ ကိစ္စကို မေးရာမှာတော့ အာဘေးက ဂျပန်နိုင်ငံစီးပွားရေး တိုးတက်ဖို့ နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ကို စဉ်းစားသွားမှာ ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ့် အစီအစဉ်တွေ စဉ်းစားရာမှာ အဲဒီလို အဆိုပြုချက်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားသွားမယ်လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
သြစတြေးလျတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ပထမဆုံး ၁ ဦး သေဆုံး
နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းပါ့သ်မြို့က ဆေးရုံတရုံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် လူနာတဦး မတ် ၁ ရက် မနက်စောပိုင်းမှာ ပထမဆုံး သေဆုံးသွားတယ်လို့ သြစတြေးလျအစိုးရ ကျန်းမာရေးအရာရှိ အင်ဒရူးရောဘတ်ဆန်က ပြောဆိုပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Diamond Princess အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်က သြစတြေးလျ လူမျိုး ၁၅၀ ကျော် ဆင်းသွားပြီးနောက်မှာ အသက် ၇၈ နှစ်အရွယ် သြစတြေးလျ အမျိုးသားကြီးကို သီးခြားခွဲထားပြီး စောင့်ကြည့်ကုသပေးနေခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမှာလည်း ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရပြီး အခြေအနေကတော့ တည်ငြိမ်နေပါ တယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ သြစတြေးလျမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစ်ခံထားရမှုမှာ ၂၅ ယောက် ရှိတယ်လို့ အစိုးရရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။ အီရန်အစ္စလာမ္မစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာလည်း ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေတာကြောင့် အီရန်နိုင်ငံက နေ ထွက်ခွာလာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားအားလုံးကို ပြည်ဝင်ခွင့်မပေးဘူးလို့ သြစတြေးလျအစိုးရက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက်က ပြောထားပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအထိ ကမ္ဘာတဝန်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၈၆၉၉၂ ဦး၊ သေဆုံးသူ ၂၉၇၉ ဦးနဲ့ ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်းသူ ၄၂၃၃၄ ဦး ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အပျော်စီးသင်္ဘောဆိုက်ကပ်မှုကို မက္ကဆီကိုဒေသခံများ ဆန္ဒပြ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှာကို လူအများ စိုးရိမ်နေကြချိန် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်က မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ ကော့ဇူမယ်အပန်းဖြေမြို့မှာ အပျော်စီးသင်္ဘော တစီးဆိုက်ကပ်တာကို ဒေသခံလူတစု ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ အမ်အက်စ်စီ မယ်ရာဗီလီရာ အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာ လူခြောက်ထောင်ကျော် လိုက်ပါလာ ပြီး သင်္ဘောအမှုထမ်းတွေ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေမရှိတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေကြောင့် ကာရေဘီယံဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုမှာ ကမ်းကပ်ခွင့် ငြင်းဆန်ခံရပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့မှာ မက္ကဆီကန် အာဏာပိုင်တွေက အဲဒီသင်္ဘောကို ကော့ဇူမယ်ဆိပ်ကမ်းမှာ ကမ်းကပ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်က ဂျပန်နိုင်ငံ ယိုကိုဟားမားဆိပ်ကမ်းမှာ ကမ်းကပ်ခဲ့တဲ့ Diamond Princess အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်က ခရီးသည်တွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၇၀၀ လောက် မြင့်တက်လာပြီး သုံးယောက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ အပျော်စီးသင်္ဘောတွေကို လူတွေ အာရုံစိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကော့ဇူမယ်ဒေသခံတဦးက “တခြားဆိပ်ကမ်းတွေ ကမ်းကပ်မခံတဲ့ သင်္ဘောကို ဘာလို့ ကော့ဇူမယ်ဆိပ်ကမ်းက အကပ်ခံတာလဲ” လို့ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ “သင်္ဘောတစီးကြောင့် ဒေသခံတွေ စီးပွားရေးကျမယ်၊ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မယ်၊ အသက်တွေတောင် ဆုံးချင် ဆုံးနိုင်တယ်”လို့ သူက ပြောခဲ့ပါတယ်။ မက္ကဆီကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ အဲဒီသင်္ဘောဟာ ဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားမယ့် အန္တရာယ်မရှိတဲ့ အကဲဖြတ်ချက်ကို အခြေခံပြီး ကမ်းကပ်ခွင့် ပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီသင်္ဘောပေါ်ပါ ခရီးသည်တွေကို ကော့ဇူမယ်ဆိပ်ကမ်းကို ဆင်းခွင့် ပြု၊ မပြု ဆိုတာကိုတော့ သဲသဲကွဲကွဲ မသိရဘူးလို့ ရိုက်တာသတင်းက ဆိုပါတယ်။
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အရေးပေါ်ကြေညာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ Covid-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာ ကူးစက်တာ မရှိသေးပေမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်က ဒေသအရေးပေါ် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဒေသတွေမှာ ကူးစက်မခံရအောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတွေကို အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရဲ့ စတုတ္ထအကြီးဆုံးမြို့က ဗိုင်းရပ်စ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီး အများပြည်သူကို အသိပညာပေးတာတွေ လုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒေသခံတွေမှာ ကူးစက်တာမရှိပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးမှာ အပြောင်းအလဲတွေ အမြန်ဖြစ်နေတာမို့ ပြင်ဆင်တာကို တိုးမြှင့်ထားရမယ်လို့ ဆန်ဖရန်စစ္စကို မြို့တော်ဝန်က ပြောပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်း Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၁၄ ယောက်က အများစုဟာ ခရီးသွားရာကနေ ကူးစက်တာဖြစ်ပြိး နှစ်ယောက်ကတော့ လူလူချင်း ကူးစက်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Diamond Princess သင်္ဘောကနေ ခေါ်ယူလာတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၃၉ ယောက်ဟာလည်း ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတယ်လို့ ရိုက်တာသတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီး ပြန်ကောင်းလာသူ ၂၇,၆၆၈ ဦးရှိ
Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကမ္ဘာတဝန်း သေဆုံးသူဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်အထိ ၂,၇၀၁ ဦး၊ ကူးစက်ခံရသူ ၈၀,၁၅၀ ဦး ရှိနေပြီး ပြန်ကောင်းလာသူ ၂၇,၆၆၈ ဦး ရှိတယ်လို့ worldometer ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်က တရုတ်ပြည်မကြီးမှာ Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ထပ်မံသေဆုံးသူ ၇၁ ယောက်ရှိပြီး တောင်ကိုရီးယားနဲ့ Diamond Princess အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်က တယောက်စီ ထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တရုတ်ပြည်မကြီး ပြင်ပမှာ သေဆုံးသူ ၃၈ ဦးရှိပါပြီ။ စင်ကာပူမှာတော့ Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၉၀ အထိ ရှိလာပြီး တောင်ကိုရီးယား၊ အီတလီနဲ့ ဂျပန် ပြီးရင် စင်ကာပူဟာ စတုတ္ထမြောက် တရုတ်နိုင်ငံ ပြင်ပ Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ အများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ဝူဟန်မြို့ရှိ ဆေးဝန်ထမ်းများအတွက် အပျော်စီးသင်္ဘော ၇ စင်း ခေါ်မည်
ဝူဟန်မြို့က ဆေးဝန်ထမ်းတွေကို ထားရှိဖို့ အပျော်စီးသင်္ဘော ၇ စင်းကို ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ‘Diamond Princess’ အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်က ခရီးသည်ရာချီ Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ် တွေ့ရှိပြီးနောက် အပျော်စီးသင်္ဘောတွေကို စစ်ဆေးနေတဲ့ အချိန်ကာလမှာပဲ တရုတ်အစိုးရက အပျော်စီးသင်္ဘောတွေကို ခေါ်ယူတာပါ။ ဝူဟန်မြို့က ဆေးဘက်ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ရေပေါ်ဟိုတယ်လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ အဲဒီသင်္ဘောတွေဟာ ပုံမှန်တော့ မြစ်ကျဉ်းသုံးသွယ် ရှုခင်းကြည့် မြစ်ကြောင်းသွား အပျော်စီး သင်္ဘောတွေအဖြစ် အသုံးပြုတာပါ။ ပထမဆုံး အပျော်စီးသင်္ဘောဖြစ်တဲ့ 'blue whale' ဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်က ဝူဟန်မြို့ကို ရောက်လာပြီး ကျန် ၆ စီးကတော့ လမ်းခရီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပျော်စီးသင်္ဘော ၇ စီးစလုံးဆိုရင် စုစုပေါင်း ခုတင် ၁၄၆၉ လုံး ပါရှိတယ်လို့ ဆင်ဟွာသတင်းက ဆိုပါတယ်။ ဒီအပျော်စီးသင်္ဘောတွေဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ဖျက်နေတဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ စားသောက်ခန်းနဲ့ သူတို့ကို ပြန်လန်းဆန်းစေမယ့် သင်္ဘောပေါ်အခြေအနေကို ဖန်တီးပေးထားမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံတဝန်းက သောင်းချီတဲ့ ဆေးဘက်ဝန်ထမ်းတွေဟာ ဟူဘေးပြည်နယ်ကို လာရောက်ပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကြိုးပမ်းထိန်းချုပ်နေပါတယ်။ အဲဒီလို ထိန်းချုပ်ရာမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်လို့ ဆေးဝန်ထမ်းအများအပြား သေဆုံးရတာ အပါအဝင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်အထိ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းဟာ ၁၁,၀၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ တရုတ်ကျန်းမာရေးအကြီးတန်းအရာရှိတဦးက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအထိ ကမ္ဘာတဝန်းမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၇၈၇၇၂ ဦး၊ သေဆုံးသူ ၂၄၆၂ ဦးနဲ့ ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်းသူ ၂၃၁၇၁ ဦး ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှာကို ကြောက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟူဘေးပြည်နယ်က ပြန်ခေါ်လာသူတွေကို ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်း ရွာသူရွာသားတွေက ခဲတွေ၊မီးကျည်တွေနဲ့ ဝိုင်း ပေါက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တခု ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်က ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ခေါ်လာသူတွေကို တင်ဆောင်လာတဲ့ ဘတ်စ်ကား ၆ စီးကို နိုဗီဆန်းဟယ်ရီ ရွာသား တွေက ခဲတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ရာကနေ ရဲတွေနဲ့ ရွာသားတွေ ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ပြန်ခေါ်လာသူတွေကို သီတင်းနှစ်ပတ်ကြာ သီးခြားစောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုဖို့ ဆေးရုံကို ခေါ်ဆောင်တဲ့လမ်းမှာ ဆန္ဒပြသူတွေက ပိတ်ဆို့ ဆန္ဒပြကြတာပါ။ အဲဒီအတွက် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ဖို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ရာချီပြီး စေလွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲဟာ ညလုံးပေါက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲကြောင့် ယူကရိန်းသမ္မတ ဇီလန်စကီက “ယူကရိန်းမှာ ဗိုင်းရပ်စ် မပျံ့နှံ့ရေးအတွက် အာဏာပိုင်တွေက အစွမ်းကုန်လုပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်၊အန္တရာယ်မရှိဘူး”ဆိုတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဟူဘေးပြည်နယ်က ပြန်ခေါ်လာသူတွေထဲမှာ ယူကရိန်းနိုင်ငံသား ၄၅ ယောက်နဲ့ နိုင်ငံခြားသား ၂၇ ယောက်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာ အခုထိ Covid- 19 ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ မရှိသေးဘူးလို့ အတည်ပြုထားပါတယ်။ Covid- 19 ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကမ္ဘာတဝန်း သေဆုံးသူ ၂,၂၄၇ ယောက်ရှိပြီး ကူးစက်ခံရသူ ၇၆,၇၃၈ ယောက်က ရှိပါတယ်။ Diamond Princess အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်က ခရီးသည် နှစ်ယောက်အပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာ သေဆုံးသူ ၁၁ ယောက် ရှိသွားပါပြီ။ တောင်ကိုရီးယားမှာ နောက်ထပ် ကူးစက်ခံရသူ ၅၂ ယောက် ရှိလာပြီး ကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း ၁၅၆ ယောက်အထိ တဟုန်ထိုး မြင့်တက်လာပါတယ်။ ကူးစက်ခံရသူ အများစုဟာ နိုင်ငံရဲ့ စတုတ္တမြောက် လူဦးရေအများဆုံး ဒယ်ဂူမြို့က ဖြစ်ပြိး ဗိုင်းရပ်စ် မပျံ့နှံ့ရေးအတွက် အထူးအစီအမံတွေ လုပ်သွားမယ်လို့ တောင်ကိုရီးယားအစိုးရက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်မှာ ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ Covid- 19 ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကနေ ပြန်ကောင်းလာသူဟာလည်း ကမ္ဘာတဝန်း ၁၈, ၅၆၁ ယောက် ရှိတယ်လို့ Worldometer ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၇၅,၇၃၅ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ၂,၁၂၉ ဦးရှိပြီ
Covid-19 ကြောင့် ကမ္ဘာတဝှမ်း သေဆုံးသူ ၂,၁၂၉ ဦး ရှိပြီး ကူးစက်ခံရသူ ၇၅,၇၃၅ ဦးရှိတယ်လို့Worldometer ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ကူးစက်ခံရပြီး ပြန်ကောင်းလာသူဟာလည်း ၁၆,၅၀၇ ယောက် ရှိတယ်လို့ အဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အရ သိရပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်က ဟူဘေးပြည်နယ်မှာ Covid-19 ကြောင့် သေဆုံးသူ နောက်ထပ် ၁၀၈ ယောက် ရှိတယ်လို့ ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် Diamond Princess အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်က Covid-19 ကူးစက်ခံခရီးသည် နှစ်ယောက်လည်း သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေက ပြောခဲ့သလို ဟောင်ကောင်မှာလည်း Covid-19 ကြောင့် ဒုတိယမြောက်လူနာ သေဆုံးခဲ့ပါ တယ်။ အလားတူ ထိုင်ဝမ် ၊ အီရန် ၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ပြင်သစ်တို့မှာလည်း တစ်ယောက်စီ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Covid-19 ကြောင့် တရုတ်ပြည်မကြီးပြင်ပမှာ သေဆုံးသူ ၈ ယောက်အထိ ရှိလာတယ်လို့ စီအန်အန် သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်က ခရီးသည်များကို ဂျပန်ဆိပ်ကမ်းပေါ် ဆင်းခွင့်ပြု
ဂျပန်နိုင်ငံ ယိုကိုဟားမားဆိပ်ကမ်းမှာ သီးခြားစောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ Diamond Princess အပျော်စီးသင်္ဘောဟာ စောင့်ကြည့်ကာလ ပြည့်သွားပြီးနောက် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်က ခရီးသည် ၅၀၀ လောက်ကို ကမ်းပေါ် ဆင်းခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူတွေနဲ့ တခန်းတည်း နေခဲ့သူတွေကတော့ သင်္ဘောပေါ်မှာ ကြာကြာဆက်နေရမယ်လို့ မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဟောင်ကောင်မှာ ဆင်းသွားတဲ့ ခရီးသည်တဦးမှာ Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ် တွေ့ရှိပြီးနောက် အပျော်စီးသင်္ဘောဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်ကစလို့ ယိုကိုဟားမားဆိပ်ကမ်းမှာ သီတင်းနှစ်ပတ်ကြာ သီးခြားစောင့်ကြည့်ခံရပါတယ်။ သင်္ဘောပေါ်မှာ လူ ၃၇၀၀ ကျော် လိုက်ပါလာပြီး ဂျပန်ကျန်းမာရေး အာဏာပိုင်တွေ စစ်ဆေးချက်အရ အခုချိန်ထိ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၅၄၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်က ဂျပန်နဲ့ တခြားနိုင်ငံသားတွေကို ခေါ်ယူဖို့ ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားတွေ ဆိပ်ကမ်းကို ရောက်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဟောင်ကောင်၊ အီတလီနဲ့ ထိုင်ဝမ်တို့ကလည်း သူတို့နိုင်ငံသားတွေကို ပြန်ခေါ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ရိုက်တာသတင်းမှာ ရေးပါတယ်။
Covid-19 ကူးစက်ခံလူနာများကို HIV ဆေး စမ်းသပ်ထိုးပေးရန် ဂျပန်အစိုးရ စီစဉ်
Covid-19 ကူးစက်ခံလူနာတွေကို HIV ဆေးတွေ စမ်းသပ်ထိုးပေးဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ ဂျပန်အစိုးရက ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်မှာ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Covid-19 ကူးစက်ခံလူနာတွေ တိုးလာတာက နိုင်ငံ့စီးပွားရေးနဲ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအပေါ်မှာ ခြိမ်းခြောက်မှု တိုးလာနေပါတယ်။ ဂျပန်အစိုးရ ထိပ်တန်းပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ယိုရှီဟီဒါဆူဂါက HIV ဆေး အသုံးပြု ဆေးခန်း စမ်းသပ်ချက်တွေ မြန်မြန်စတင်နိုင်စေဖို့ လောလောဆယ် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဆေးဝါးသစ်ခွင့်ပြုချက်ရဖို့ ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုတော့ ဆူဂါက မဖြေခဲ့ပါဘူး။ ဂျပန်ဆိပ်ကမ်းမှာ ရပ်ထားတဲ့ Diamond Princess အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်က အမေရိကန် နိုင်ငံသား ၃၀၀ ကျော်ကို အမေရိကန်အစိုးရက စင်းလုံးငှား လေယာဉ်နှစ်စင်းနဲ့ ခေါ်ဆောင်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်မှာတော့ သူတို့ဟာ မိခင်နိုင်ငံကို ပြန်ရောက်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း လူ ၃၇၀၀ လိုက်ပါလာတဲ့ အဲဒီသင်္ဘောပေါ်မှာ Covid-19 ကူးစက်ခံ လူနာအရေအတွက် ၄၅၄ ယောက်ထိ ရှိလာတယ်လို့ ဂျပန်ကျန်းမာရေး အာဏာပိုင်တွေက အတည်ပြုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ အီတလီနဲ့ တောင်ကိုရီးယား အစိုးရတွေဟာလည်း သင်္ဘောပေါ်က သူတို့ နိုင်ငံသားတွေကို ပြန်ခေါ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်ဆိုပြီး ရိုက်တာသတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟူဘေးပြည်နယ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်ထိ သေဆုံးသူ ၁၃၈၀ နဲ့ ကူးစက်ခံရသူ ၆၃၈၅၁ ဦး ရှိပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့ တနေ့တည်းမှာ သေဆုံးသူ ၁၁၆ ယောက်နဲ့ ထပ်မံကူးစက်ခံရသူ ၄၈၂၃ ယောက် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် စာရင်းတွေအရ ကမ္ဘာတဝှမ်းသေဆုံးသူ ၁၃၈၃ ယောက် ရှိပြီး ကူးစက်ခံရသူ ၆၄,၄၃၈ ယောက် ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီး ပြန်ကောင်းလာသူဟာ ၇၀၈၀ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်က အသက် ၈၀ အရွယ် ဂျပန်အမျိုးသမီးတဦး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေက ပြောကြားပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဂျပန်၊ ဟောင်ကောင်နဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့မှာ ၁ ဦးစီ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ပြင်ပမှာ ကူးစက်မှု သိပ်မမြင့်မားဘူးလို့ ပြောကြားပါတယ်။ ခြွင်းချက်တခုအနေနဲ့ ဂျပန်ဆိပ်ကမ်းမှာ ကမ်းကပ်ထားတဲ့ Diamond Princess အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာ နောက်ထပ် ကူးစက်ခံရသူ ၄၄ ယောက်တွေ့ရှိပြီး စုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူ ၂၁၈ ယောက်အထိ ရှိလာပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးနှုန်းနဲ့ ပြင်းထန်နှုန်း ပုံစံတွေမှာ သိသိသာသာ အပြောင်းအလဲမရှိဘူးလို့လည်း WHO က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စောင့်ကြည့်ခံ သင်္ဘောပေါ်မှ ထွက်ခွာခွင့်ပေးရန် အမေရိကန် စုံတွဲ တောင်းဆို
ဂျပန်ကမ်းလွန်မှာ သီးသန့်ခွဲ စောင့်ကြည့်ခံထားရတဲ့ ဇိမ်ခံသင်္ဘောပေါ်က စုံတွဲတတွဲဟာ သူတို့ကို သင်္ဘောပေါ်ကနေ ထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ အာဏာပိုင်တွေကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်နေ့မှာ သင်္ဘောပေါ်မှာရှိတဲ့ ခရီးသည် ၄၁ ဦးဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရတယ်ဆိုတာကို တွေ့ခဲ့ရပြီး စုစုပေါင်း ကူးစက်သူအရေအတွက်ဟာ ၆၁ ဦးအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ စောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ Diamond Princess သင်္ဘောပေါ်မှာ ခရီးသည် ၃၇၀၀ ဦး ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီထဲက အမေရိကန်စုံတွဲဖြစ်တဲ့ ဖီးလစ်နဲ့ ဂေးကော်တာတို့ဟာ သင်္ဘောပေါ်မှာ ပိတ်မိနေတာ သုံးရက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး အမေရိကန် အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ ဂျပန်အစိုးရနဲ့ ဆက်သွယ်ကာ သူတို့ကို သင်္ဘောပေါ်ကနေ ထွက်ခွာခွင့်‌ပေးဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ သင်္ဘောပေါ်ကနေ ထွက်ခွာလို့ ရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေနေတယ်လို့လည်း ဒီစုံတွဲက Reuters ကို ပေးပို့တဲ့ ဗွီဒီယိုမက်ဆေ့ချ်မှာ ပြောထားပါတယ်။ “သူတို့ဟာ ခရီးသွားလာခြင်းနဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေအတွက် ဆေးဝါးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်ပြီးတော့ သင်္ဘောပေါ်က ထွက်ခွာဖို့ လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာ ဂျပန်အစိုးရဘက်က ထွက်ခွာခွင့် ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့” ဂေး‌ကော်နာက ပြောပါတယ်။ “သင်္ဘောပေါ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေ ရှိနေပြီဆိုတာကို လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှ သင်္ဘောတာဝန်ရှိသူတွေက ပြောကြောင်း၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် အရမ်းကို ထိတ်လန့်နေပြီ” လို့ ဂေးရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဖီးလစ်က ပြောပါတယ်။ သူတို့ဟာ စောင့်ကြည့်ကာလအတွင်း သင်္ဘောပေါ်မှာ ရှိနေမယ့် လေရဲ့အရည်အသွေးအတွက်လည်း စိုးရိမ်မိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ Diamond Princess သင်္ဘောဟာ ယိုကိုဟားမားဆိပ်ကမ်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်နေ့က ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး သင်္ဘောပေါ်မှာရှိတဲ့ ဟောင်ကောင်အမျိုးသား တဦးမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ရှိနေတာ တွေ့ခဲ့ရတာကြောင့် ၁၄ ရက်ကြာ စောင့်ကြည့်မှုပြုလုပ်နေတဲ့ သင်္ဘောလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကာနီဗယ်အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၄၁ ဦးထပ်တွေ့
ကာနီဗယ်အပျော်စီးသင်္ဘောကြီး Diamond Princess ပေါ်မှာ နောက်ထပ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၄၁ ယောက်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ကူးစက်ခံရသူ ၆၁ ယောက် ရှိတယ်လို့ ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ လူပေါင်း ၃၇၀၀ ဝန်းကျင် လိုက်ပါပြီး ရောဂါမကူးစက်အောင် သီတင်းနှစ်ပတ်ကြာ သီးခြား ထားရှိချိန်မှာပဲ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့ ခရီးသည်အရေအတွက်ဟာ တဟုန်ထိုး မြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။ ကျန်ရှိ စမ်းသပ်ရလဒ် ၁၇၁ ယောက်ကနေ ထပ်မံကူးစက်ခံရသူတွေကို တွေ့ရှိတယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ခါဆိုနိုဘု ခါတိုက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထပ်မံကူးစက်ခံရသူတွေကို တွေ့ရှိတာကြောင့် ဂျပန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ အယောက် ၈၀ ကျော်သွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ Diamond Princess ဟာ ဂျပန်ကို တရားဝင်ရောက်လာတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် သင်္ဘောပေါ်က ကူးစက်သူတွေကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားတဲ့သူတွေအဖြစ် မသတ်မှတ်ဘူးလို့ ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၂၁ ယောက်ရှိပြီး အဲဒီထဲမှာ ဝူဟန်မြို့ ကို မသွားခဲ့တဲ့သူ ၄ ယောက်သာ ရှိတယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ခါတိုက အတည်ပြုပြောခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူဘေးပြည်နယ် ဝူဟန်မြို့ကနေ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလက စတင်ခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ဦးရေဟာ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအထိ ၃၁၀၀၀ ကျော်နဲ့ သေဆုံးသူ ၆၃၈ ဦးရှိသွားပြီလို့ သိရပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၁ ဦးလိုက်ပါလာသည့် ဂျပန်ဇိမ်ခံသင်္ဘောကို သီးသန့်ထား
ဂျပန်နိုင်ငံ ယိုကိုဟားမားမြို့ဆီ ဦးတည်သွားနေတဲ့ ဇိမ်ခံအပျော်စီးသင်္ဘောတစီးပေါ်မှာ စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ ဟောင်ကောင်သားတယောက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ် ကူးစက်ခံရအပြီးမှာ အဲဒီသင်္ဘောတစီးလုံးကို ရောဂါခြေချုပ်နဲ့ သီးသန့်ထားမယ်လို့ ဂျပန်အစိုးရက ပြောပါတယ်။ အသက် ၈၀ အရွယ် ဟောင်ကောင်သားဟာ ဂျပန်ကို ပြီးခဲ့တဲ့လက လေယာဉ်နဲ့လာပြီး Carnival Japan ကော်ပိုရေးရှင်းပိုင် Diamond Princess ဇိမ်ခံသင်္ဘောကို စီးခဲ့တယ်။ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်က သင်္ဘောပေါ်ကနေ ပြန်သွားတယ်လို့ NHK သတင်းဌာနက ပြောပါတယ်။ အဲဒီခရီးသည်ဟာ သင်္ဘောပေါ်က မဆင်းခင် ချောင်းဆိုးနေပေမယ့် ဇန်နဝါရီ ၃၀ ထိ မဖျားခဲ့ဘူးလို့လည်း NHK သတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်မှာတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဖောက်သည်တွေ ရောဂါကူးစက်ခံအဖြစ် စမ်းသပ်ချက်ရလဒ် ထွက်လာခဲ့ရင် ရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ပြန်စစ်ဆေးတာဟာ သင်္ဘောရဲ့ ပုံမှန်စံချိန် အလေ့အကျင့်ပဲလို့ ဇိမ်ခံသင်္ဘောတာဝန်ခံက ပြောပါတယ်။ ဝန်ထမ်းအားလုံးနဲ့ ဧည့်သည်အားလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို စစ်ဆေးတာခံယူဖို့ ဂျပန် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကိုခွင့်ပြုရေးအတွက် သင်္ဘောကို ပြန်လှည့်ဖို့ အချိန် ၂၄ နာရီလောက် နောက်ကျခဲ့တယ်လို့ သင်္ဘောကုမ္ပဏီက အတည်ပြုထားပါတယ်။ ဇိမ်ခံသင်္ဘောပေါ်မှာ လောလောဆယ် ခရီးသည် ၂၆၆၆ ယောက်နဲ့ ဝန်ထမ်း ၁၀၄၅ ယောက် ရှိနေပါတယ်။
Thai Women, Online Courting With Thai Brides, Thai Singles, Thai Ladies , Thai Brides
At that exact moment Dracula is seen grabbing her neck and hurling her away from him. Harker soon fears for his life after this encounter, at one point considering he sees them dancing within the sky outside his bedroom when he nearly nods off, which strengthens his resolve to escape. Dracula makes good on his word and leaves Harker to the sisters when he heads for England. Though Harker manages to flee the fort shortly after, he's badly traumatized by the encounter and is recognized with mind fever.
The web site also has an app for android customers to attach with their particular Chinese woman from wherever on the earth.
He manages to stake all seven and arranges their our bodies into the shape ofacross so that Dracula could be unable to method them to remove the stakes.
In the novel the three vampire women aren't individually named.
Indian women for marriage take lengthy-time period relationships seriously.
Instead, Indian singles would observeaassured, dependable, and respectable husband and wouldn't be afraid to disagree withatyrannical or demeaning man. As it has been talked about above, hot Indian women are normally introduced up based mostly on traditional Indian upbringing. It is possible to say that the majority of women in India are assured, loyal, slightly strict, proud, and incredibly loving.
I am an unbiased, hardworking, caring, good, funny, honest, sincere, and clever younger woman. The historic Turnblad Mansion and modern Nelson Cultural Center are the perfect settings for weddings, corporate conferences, non-public parties and special events. Since 1929, the Turnblad Mansion has been the backdrop foranumber of the most romantic weddings and spectacular soirees in the metropolis. Step2Love places that expertise to use for you, that will help you discover the woman swedish mail order brides of your desires. At Step2Love, we provide use probably the most advanced technologies to make your communications together with your girl easy, high quality and on demand. We again up these communication tools with unparalleled buyer help, to ensure you have solely one of the best experiences. Step2love is an unique and thrilling website, created together with your convenience and luxury in mind.
MatchTruly does lots of what different web sites and services offer you but makes it inexpensive and even free. They pick the features that they really feel can benefit you and assist you to in constructing proper rapport with your mail-order bride. Match Truly provides communication options like instant messaging and reside webcam chat that resemblesaSkype name.
Your Swedish mail order spouse will know the way to maintain the stability and he or she’ll craveasignificant life. Lagom is one more Swedish idea that's rapidly taking heart-stage now. Today’s hectic trendy lifestyle forces individuals to rush around and overlook in regards to the essential issues. The Scandinavian method allows you to enjoy the small things and big achievements, which, nonetheless, are greater than sufficient. Starting fromapiece-life stability, to the ornament of your house andasustainable way of life, this encourages you to take everything carefully. Brought up in Swedish society, your soulmate will always be formidable, however she’ll appreciate what you've at this second, too.
Still, girls from Japan don't contemplate career to be their primary priority, in spite the fact that they can be profitable. With the help of this review, you now possess helpful information about Indian mail order brides. These girls are extremely beautiful, passionate, clever, and purposeful. It is highly suggested to keep in mind that Indian women know their price and are very proud and assured women. They can be loyal and respectable wives and mothers if their husbands are honorable and caring. Family is probably the most essential thing for Indian girls for marriage.
Sweden mail order brides areatrump card for foreigners asaresult of they`re open to relationship men of different races. They haveathing for US men, however it`s customary to see varied couples there together with native blondies subsequent to African Americans. Despite the popularity of Latina and Slavic beauties, Swedish mailorder brides remainaimaginative and prescient of beauty for many males. These are tall, truthful-skinned blonde girls with proportionate facial features and slim figures. We don’t mean that you should change your character just to satisfy her preferences. But some insights into the ideals of Swedish women can work to your advantage.
If you need to date Japanese women, you should discoveraweb site that is stuffed with ladies who need to meetaforeigner. Aside from that, every little thing is simple — purchaseapremium subscription , select your greatest photo, and keep your conversations going. Many lovely Japanese girls love Western guys simply due to the color of their pores and skin, so you have fairly high possibilities to getaJapanese woman. Learn Japanese, wear decent clothes, deal with them with respect, act likeagentleman.
Anything may be thought-about as an offense, abuse, or improper remedy. As it has been just stated above, exhibiting affection andafocus to Indian ladies for marriage would never be thought to be one thing abusive or inappropriate. Of course, should you merely wish to purchase yourself an Indian girlfriend, you will be rejected.
Anna makes an attempt an assassination by controllingapartially turned farmhand to assault him, but Dracula simply thwarts the try, reprimands them and sends them away. When they are killed by Van Helsing, Dracula does point out that, while he was glad that their deaths prevented jealously with Mina, that he did not wish that destiny on them as well. The Brides of Dracula idea was additionally present in the 1987 horror comedy The Monster Squad, in which Dracula abducts three younger women and turns them into his vampire brides. Commonly all three brides seem in movie adaptations of the novel, though some film adaptations depict them asablonde,abrunette, andaredhead. Bridge of Love creates the bridge between you and your future bride by serving to you establish communication, conferences and extra. Mail-Order Brides from international nations are beautiful and well worth the money spent to satisfy and be together with them. With that being said, it is important to know how expensive all of this will get.
Their motto isn't only to offer you essentially the most respectable platforms for love search however to provide youachance to be happy normally. Everyone deserves happiness and that’s what guides them in their work.
Although she is usuallyalittle bit shy and reserved, this lady is not going to cover her actual perspective to most issues. We might not evaluation every well-liked dating web site that presently exists, but we do our best to offer solely high quality content material and suggestions to our readers.
The centerpiece of the Cartier ring is an over 10-carat emerald-minimize diamond, which is flanked by baguettes and set in platinum. The Queen’s engagement ring, given to her by Prince Philip in 1947, will never exit of style. The diamonds were taken from atiarathat belonged to Philip’s mom, Princess Alice of Greece—a present she obtained from Tsar Nicholas II and Tsarina Alexandra of Russia!